Boosaaso: Weriye Cabdiweli Gooni Oo Amar Madaxtooyada Kasoo Baxay Lagu Xiray [Dhegeyso] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Boosaaso: Weriye Cabdiweli Gooni Oo Amar Madaxtooyada Kasoo Baxay Lagu Xiray [Dhegeyso]
Boosaaso: Weriye Cabdiweli Gooni Oo Amar Madaxtooyada Kasoo Baxay Lagu Xiray [Dhegeyso]
April 14, 2012 - By: Moha Salat
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa lagu xiray weriye Cabdiweli Xasan Cabdi (Gooni) oo kamid ah weriyeyaasha ugu magaca dheer Puntland.
Weriye Gooni oo ay saqdii dhexe ee xalay gurigiisa ciidamadu ka kaxaysteen ayaa ku xiran xabsi ku yaal gudaha dekedda magaalada Boosaaso.
Ciidamada weriye Cabdiweli xiray ayaa ahaa kuwo ka tirsan laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Puntland kuwaas oo abbaare 1:00 saqdii dhexe xalay gurigiisa ugu soo dhacay.
Xasan Cabdi Gooni oo ah aabaha weriye Cabdiweli Gooni oo warbaahinta Horseed Media lasoo xiriiray ayaa ka hadlay xarigga wiilkiisa lagula kacay isagoo sheegay inuu yahay mid aan sharci ahayn.
Xasan Gooni ayaa sidoo kale sheegay in laamaha ammaanka ee Puntland oo iyagu leh sharciyadda ciddii loo baahdo in lasoo xiro ay iska fogeeyeen xarigga Cabdiweli Gooni iyagoo tilmaamay inaysan waxba kala socon.
Wuxuuna isaga oo hadalkiisa sii wata intaas raaciyey in Dastuurka Puntland uu ogolaanayo in qof walba oo muwaadin ahi uu xor u yahay inuu fikradiisa cabiro sidaas darteedna aysan munaasib ahayn islamarkaana aan loo duqaadan karin in bulshada la caburiyo.
Dhegeyso Codka Aabaha Weriye Gooni
Aabaha weriye Cabdiweli Gooni ayaa ugu danbeyntii ugu baaqay dowladda in ay xoriyadiisa dib ugu soo celiso maadaama uu ahaa nin dhalinyaro ah oo iskiis u shaqeysta islamarkaana ay qoys iyo caruur dhowr ahi ku taxaluqaan.
Dhinaca kale ciidamada weriyahan gurigiisa ka kexeeyey oo uu watey taliye lagu magacaabo Muslim ayaa sheegay in aysan ka warqabin sababta loo xirayo balse lagu amaray inay soo qabtaan.
Amarka Cabdiweli Gooni ayaa kasoo baxay madaxtooyada dowladda Puntland sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo ciidamadii xariggiisa ka danbeeyey.
Lama oga ilaa iyo hadda sababta ka danbeysa xarigga weryiyahaas, wuxuuna noqnayaa weriyihii 2-aad ee muddo todobaadyo gudahood ah magaalada Bosaaso lagu xiro.
Weriye CabdiWeli Xasan Cabdi (Gooni) oo horay agaasime uga soo noqday warbaahinta Horseed Media wuxuu hadda xubin ka yahay ururka NUSOJ inkasta oo xiligan aysan jirin warbaahin uu si toos ah ula shaqeeyo.